तपाईका बच्चाहरु किन तपाईका कुरा सुन्दैनन? | Hamro Patro
बिहानको १२ : ३३
तपाईका बच्चाहरु किन तपाईका कुरा सुन्दैनन?
नामलाई बिगारेर अन्तिम अक्षरमा रेप लगाएर रामे या श्यामे भन्ने चलन नेपाली समाजको बहुतै नराम्रो चलन हो । हुन त अभीभावक भएका हिसाबमा बालबालिकाका क्रियाकलापले तपाइलाई समयसमयमा वाक्क नबनाउने हैन तथापि संयम राखेर उनीहरुलाई यथोचित सस्कार अनि संबोधन सिकाउने अभीभावकले नै त हो ।
आमाबुवा र छोराछोरीका बिचमा भन्ने, सुन्ने अनि बुझ्ने प्रक्रिया हुन अत्यन्तै जरुरी छ । यसै कारणले पनि आमाबुवा अनि छोराछोरीहरु बिचमा राम्रो सञ्चार, समन्यव नभएमा एकअर्काका कुराहरु नसुन्ने अनि घरमा सदैव झगडा अनि मनमुटाव भइनैरहन्छन् । व्यस्त जिवन अनि कम समयका कारणले पनि आमाबाबु र छोराछोरी बिचको समबन्ध स्क्ूलको फिस तिरिदिने अनि स्कूसम्म पूर्याउने सम्म मात्र सिमीत त भएको हैन ? नेपालमा पनि धेरै आमाबाबु अनि छोराछोरीको समबन्ध धेरै अघिदेखि नै बिग्रिन थालिसकेको हुन्छ, समबन्धलाई राम्रो सन्तुलनमा राख्न जरुरी हुन्छ ।
आउनुहोस् आमाबाबुका कुराहरु छोराछोरीले किन सुन्दैनन त ? भन्ने बिषयमा अमेरिकन साइकोलोजीकल सोसाइटीले गरेको एउटा अध्ययन अनि त्यसको मुख्य बुँदाहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न चाह्यौं । कृपया अब उप्रान्त आफ्ना छोराछोरीहरुले आफ्नो कुरा धेरै सुनिदिउन जस्ते लाग्छ, टेरि दिउन जस्तो लाग्छ भने यि बुँदाहरु पालना गर्नुहोला ।
१ बाबुआमाले धेरै भनेका भनै गरेका कारणले पनि छोराछोरीहरुले सुन्न र बुझ्न झर्को मान्नेगर्दछन्
बिहानै अनि बेलुकै हरेक क्षण अर्ती, उपदेश अनि ज्ञानले छोराछोरीको कान भर्ने चलन नेपाली समाजमा पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ । बालबालिकाले एक पटकमा एक प्रकृतीका सिमीत जानकारीहरु मात्र मष्तिष्कमा लिन सक्दछन्, सदैव एकैप्रकारका अनि धेरै नै बिषयगत जानकारीहरुको ओभरडोजले उनीहरुलाई ओतप्रोत गर्ने बानी नराम्रो नै हो । ठिक्क शब्द प्रयोग गरेर, मिठो अनि मिजासिलो रुपमा तथा उनीहरुले बुझ्ने गरि नअड्कीकन अनि रमाइलो रुपमा भन्ने बानी नै प्रभावकारी सञ्चारको प्रथम कदम हो ।
२ तपाई कराउने र नराम्रा शव्द या गालीहरु पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ कि ?
नामलाई बिगारेर अन्तिम अक्षरमा रेप लगाएर रामे या श्यामे भन्ने चलन नेपाली समाजको बहुतै नराम्रो चलन हो । हुन त अभीभावक भएका हिसाबमा बालबालिकाका क्रियाकलापले तपाइलाई समयसमयमा वाक्क नबनाउने हैन तथापि संयम राखेर उनीहरुलाई यथोचित सस्कार अनि संबोधन सिकाउने अभीभावकले नै त हो । शव्द चयनको कडा अनुशाषन हुन जरुरी छ, तपाँईका शव्दहरुले बाबालिकाको कोमल भावनात्मक अनि संवेगात्मक पक्षमा हानी नगरोस भी सचेत रहनुहोला ।
३ उनीहरुका कुराहरु सुन्ने र उनीहरुसंग कर्त बाहेकका कुरा गर्ने तपाईसंग फुर्सत छ त ?
बालबालिकाहरु पक्कै पनि तर्कसंगत कुरा गर्दैनन्, उनीहरु रमाईला, ठट्यौली, सपना अनि परिपुतलीका कुरा गर्दछन् । यि उनीहरुका कुरा सुन्ने अनि त्यसै अनुरुप कुरा गर्ने बानी छ तपाईको ? या सामान्य झर्को मानेर तर्कको भार बोकाउनुहुन्छ उनीहरुको परिकल्पनालाई ? उनीहरुसंग जति उनीहरुका कुरा गर्नुहुन्छ ? उनीहरुका बारेमा सोध्नुहुन्छ ? त्यतिनै उनीहरुले तपाईका कुरा सुन्दछन् है ।
४ उनीहरुका भावना र बिचारलाई वास्ता त गर्नुहुन्छ ?
माया भनेको बेलामा खाउ, सुत अनि पढ भन्नुमात्र हैन ? उनीहरुको भावना अनि बिचारलाई कदर गर्न सक्नु पनि जरुरी छ है । बिशेषत तपाईको बच्चाले आफू दुख्खी या तनावमा छु भनेको या व्यक्त गरेको खण्डमा उनीहरुको बिचार अनि कारण खोतल्ने अनि बास्ता गर्ने गर्न जरुरी छ ।
खुशी किन भएका छन् भनेर पनि जान्नुहोला है ।
५ उपयूक्त समयमा उचित कुराकानी गरौं
कतिखेर तपाईको बच्चा कुरा गर्न उपलव्ध हुन्छन् त्यस अनुसार कुरा गरौं । टिभी हेर्दा या रमाईलो गर्दा नै उनीहरुको समय खाने गरि कुरा नगरौं । उनीहरुलाई देखाउनुहोस कि उनीहरु अनि उनीहरुका बिचार तपाईका लागि महत्वपूर्ण छन् र उनीहरुले गरेका काम प्रति तपाइको गर्व अनि रुची छ भनेर देखाउनुहोस् । तपाईको परिवारमा अभीभावक र छोराछोरीबीच सञ्चार सुमधुर होस् । माथीका बुँदा बिचार गर्नुहोला है।